Imveliso yetrektara, ababoneleli - Abavelisi beTrektara baseChina
Intengiso eshushu yokuLima iMini Mini yoGandaganda
Ingcaciso yeModeli: ZC-QH121, ZH-QH151, ZC-QH181, ZC-QH201 Injini: Tye, isilinda enye, ukubetha kane, Amandla apholileyo ngamanzi: 8.82-25.74KW Ibhokisi yemiyalezo: Ibhokisi yebhokisi ephambili kunye nebhokisi yebhokisi encedisayo Gear No. (Phambili / ubuyisele umva): 6/2 Isantya esilinganisiweyo: 2400 r / min Clutch: Inqanaba elinye, elomileyo, idiski yediski, rhoqo, iTrism yokukhuhlana (Ngaphambili / ngasemva): 600-12 / 750-16 Min. ukucoca umhlaba: 210mm Umkhondo wevili: 680-740mm, unokutshintsha ngokwemfuno yakho. UDimensio ...
I-12hp ukuhamba ngetordordiesel / ukuhamba ngasemva kwetrektara / ukuhamba ngombane kwetrektara
Yonke eyenzelwe ngaphandle yangaphandle, ine-injini, isisu semoto, umbane, esetyenziselwa ukuhambisa kunye nokuhambisa.
I-18hp Idizili entsha yokuhamba ngombane emva kwetrektara ye-OEM
18HP ukuhamba kwetrektara / ukuhamba emva kwetrektara
Ubhetyebhetye obulungele ukuhamba kwetrektara ezimbini ezinamavili ngombane wokuqalisa ngombane
Ukuhamba kwetektala ye-diesel inesakhiwo esilula kunye nesicwangcisiweyo, ubunzima bokukhanya, inokusetyenziswa ngokubanzi kumabala ahlukeneyo njengefama encinci, izidiliya, igadi yeentyatyambo, greenhouse ingakumbi efanelekileyo intsimi yeentaba.
4 × 4 Ezolimo Idizili Mini itrektara 4wd NgeCabin / ngeLanga umthunzi
Itrektara enamavili amane luhlobo lwebhotile yokutsala kunye nokuqhuba kunye nomsebenzi opheleleyo, olula ukusebenza kunye nazo zonke iintlobo zoomatshini basefama. Isetyenziswa ngokubanzi ukulima, ukulima rotary, ukuhlwayela, ukunkcenkceshela, ukutshiza, ukuvuna kunye nezothutho njl. Kumasimi e-paddy, umhlaba owomileyo, umhlaba owomileyo, kunye negadi yeziqhamo.
12hp 15hp 18hp 20hp 24hp 28hp 32hp 35hp 4 Ivili elincinci leTrektara elincinci
Iitrektara ezincinci ezitsha ezinezixhobo ezahlukileyo, zilungele amathafa, iintaba kunye neendawo ezineenduli, zidityaniswe nezixhobo ezifanelekileyo zokulima, ukulima ngokujikelezayo, ukuvuna, ukutyala, ukumpompa neminye imisebenzi.
Le yitrektara yethu entsha (itrektara encinci), itshintshiwe kwiitrektara ezihambayo. Umahluko ngeentlobo ze-commen zonke iivili zazo ezine zinokuhamba.
I-China Ukulima Umbane weetrektara 30hp 35hp 40hp 45hp 50hp 55hp 60hp
Itrektara inenqaku lokusebenza okuphezulu, ukusetyenziswa okuphantsi kwepetroli kunye nokusebenza ngokulula njl. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi eyahlukeneyo emincinci efana negadi, ifama, imisebenzi yepaki engaphantsi komhlaba kunye nolwakhiwo lwasezidolophini.
Ukubonelela ngeFektri encinci yeFama yeTrektara Ixabiso
I-1) Iinjini eziguquguqukayo nezinamandla ezinokusetyenziswa okuphantsi kwepetroli -Khulisa imveliso yakho kunye nokusebenza kakuhle.
2) Uyilo lwe-Ergonomic kunye ne-compact -Kunika amava awonwabisayo ngelixa ulima, ulima, ulima njl.
3) Izixhobo ezinokutshintshwa ezifama- isilimi somthi esirhabaxa, itreyila, umvuni wepotota, umatshini wokutsala, isixhobo sokucheba iFM kunye nenye into.
Itrektara encinci yefama encinci iyathengiswa
Ukubonelelwa ngefektri Ixabiso eliphantsi
12hp 15hp 18hp kunye ne-20hp injini yedizili
China ukuvelisa 20hp ukuhamba itrektara / ezimbini ivili itrektara ezithengiswayo
I-15hp ukuhamba kwetrektara / itrektara encinci yokuhamba / ifama itrektara enamavili amabini / abenzi beetrakta ezimbini